Jahanbegloo, Manampahaizana Nofonjaina & Ny Fitafy Islamika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2018 4:18 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nuvoaka tamin'ny May 2006)
Marobe ireo bilaogera no nanazava ny antony nisamborana an'i Dr.Ramin Jahanbegloo, safiotra Canadiana-Iraniana manampahaizana sady mpanao gazety. Nanomboka hetsika samihafa ireo bilaogera sasany mba ho fanampiana azy hivoaka na farafaharatsiny, hamelàna ny olona hahafantatra ny zavatra mitranga ao Tehran. Fiampangàna nataon'ny governemanta an'i Jahanbegloo ny hoe “mifandray amin'ny any ivelany”.
Ny vondrona ao Toronto ho an'ny Fianarana ny Iraniàna dia nanomboka bilaogy iray hitaterana ireo vaovao momba an'i Jahanbegloo. Novakianay tao anatin'io bilaogy io ny hoe :
Nosamborina tamin'ny Arpily lasa teo i Ramin Jahanbegloo, filohan'ny Biraom-Pikarohana ara-Kolontsaina, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana miorina ao Tehran, no sady fantadaza mpiaro fatratra ny zon'olombelona, rehefa nandalo tao amin'ny seranampiaramanidin'i Teheran rehefa niala avy any India handeha hanao kaonferansa any Bruxelles. Rehefa tsy tonga tany amin'ilay kaonferansa tao Bruxelles i Jahanbegloo ny Sabotsy, nifandray tamin'ireo manampahefana kanadiàna ireo mpiaramiasa aminy, ary ireo manampahefana ireo indray no nifandray tamin'ireo manampahefana tany Teheran. Nilaza tamin-dry zareo Kanadiana ireo manampahefana Iraniàna fa ‘manaraka fitsaboana’ i Jahanbegloo saingy nosakanana tsy hahazo mitsidika azy ireo manampahefana kanadiàna.”
Shahram Kholdi, bilaogera mipetraka any Royaume-Uni no sady naman'i Jahanbegloo, manoratra ny antony maha-zavadehibe ilay raharaha famonjàna io manampahaizana io ho an'ny fikambanana sivily iraniàna. Hoy ny Blogger:
“Mampiahiahy ny fisamborana an'i Dr. Jahanbegloo ary ny famotsorana azy dia tokony ho tanjona ho an'ireo rehetra izay miasa loha ho amin'ny fampiroboroboana ny fikambanana sivily, toerana malalaka ho an'ny daholobe mba hanaovana adihevitra politika, ary ny farany saingy tsy kely indrindra dia habaka iray azo antoka hanaovana ny adihevitra toy izany amin'ny fomba tsy misy herisetra. Efa mahazatra an'i Ramin ny miteny hoe “tsapanao fa nahafantatra zavatra ianao rehefa tratry ny tampoka tamin'ny fomba tena tsy nampoizinao tokoa ao anatin'ny sehatry ny fikarohanao.” Antenaiko ny fisamborana azy fa tsy hanosika ahy velively hanokatra toko vaovao amin'ny fandalinako an'i Iràna taorian'ny revolisiona, saingy tena lasa zavatra mihoatra lavitra noho izany aza ilay izy ankehitriny: tolona iray.”
Saraye biseda dia bilaogera iray hafa manandrana ny hahatakatra ny antony nikendrena an'i Jahanbegloo. Satria ilay bilaogera, manampahaizana nofonjaina, tsy anatin'ireo sokajy saropady izay arahan'ny governemanta maso akaiky tokoa. Sokajy roa lehibe no tena iharan'ny fanarahamaso, hoy ny bilaogera, ao Iràna. Ny voalohany dia ireo olona miresaka politika sy manohitra ny fanjakàna iraniàna. Ny faharoa dia misy an'ireo kintana malazan'ny fanatanjahantena sy ny sarimihetsika. Ity vondrona farany ity dia arahan'ny olona maro tokoa ka arahan'ny governemanta maso akaiky tokoa mba tsy hiteny zavatra tsy mety ara-politika. Hoy ny Blogger manampy: Jahanbegloo tsy ao anatin'ny iray amin'izy ireny ary nanaja mandrakariva ny tsipika mena tsy azo ihoarana sy tsy niditra velively tamin'ny resaka politika (Persiàna).
Pasadar, bilaogera iray mpomba ny fanjakàna, tsy miombona hevitra amin'izany. Ho azy, Jahanbegloo dia mifandray amin'ireo hery ao anatin'ny Diaspora (zanaka am-pielezana) mpanohitra ny governemanta. Tsipihany fa marobe tamin'ireo fanambaràna manohitra ny governemanta nosoratan'ireo mpomba ny fitondram-panjàkana ao anatin'ny Diaspora no nosoniaviny.
Nooraninejad milaza hoe tsy takatry ny sainy rehefa nolazaina fa mpitsikilo i Jahanbegloo . Mba ho mpitsikilo, ilainao ny mahazo vaovao avy any rehetra any ary mizara izany ho an'olona na toerana iray hafa any ananona any. Ny fepetra voalohany hahatonga anao ho mpitsikilo dia ny fanananao fahafahana mahazo vaovao. Manontany ny Blogger, vaovao toy ny inona no mba afaka nidiran'i Jahanbegloo. Manampy izy:
“Angamba efa niova ny dikan'ny hoe asa fitsikilovana. Angamba izay olona mampianatra amin'ny oniversite manao asa fikarohana sy manoratra boky dia azo raisina ho mpitsikilo amin'izao androntsika izao“!
°Olana iray hafa anatin'ireo bilaogy iraniàna ireo fanontaniana mifandray amin'ny Hijab ( fitafy Islamika). Mamaky isika any anaty vaovao hoe tsy maintsy ho henjehan'ny manampahefana ireo vehivavy tsy manaraka ny famaritana napetraky ny fitondràna ao Iràna momba ny fitafy islamika tsara. Noresahan'ireo bilaogera io olana io, miaraka amin'ireo hevitra maro mifanipaka.
Bilaogy iraisana ny Free hijab, natomboka mba hanoherana ny fanerena hitafy hijab. Maherin'ny telopolo ireo bilaogera no efa nanjohy io bilaogy io ary miteny fa miankina amin'ny tsirairay ny fisafidianana izay fitafy ho entiny fa tsy an'ny governemanta (Persiàna).
Hojreh, ekleziastika & bilaogera, miteny hoe tsy manohitra ilay fanenjehana ireo olona tsy manaja ny fitafy islamika tsara. Saingy ampiany fa rehefa tsy misy ny mangarahara sy lalàna mazava momba ny hoe hijab tsara na fitafy islamika tsara, tsy misy dikany sy tsy misy vokany izay fanelanelanana rehetra atao.
“Reporter is my Occupation” nampitaha ny Kaominisma sy ny hetsika iraniàna momba ny fitafy islamika:
“Heveriko fa tsy hisy olona tsy hahatadidy ny vanimpotoana nampangoritsina ny vehivavy rehefa misaina ny vatany…tsy maintsy nitafy betsaka & betsaka ireo vehivavy na dia lohataona mahamay aza …fa afaka manana izay endrika tiany hisehoana ry zareo lehilahy (farafarahatsiny rehefa ampitahaina amin'ireo vehivavy) ary tsy maintsy hita ao anaty fiarahamonina. Tsy misy olona hilaza fa zo fototra ho an'ny olombelona tsirairay ny fisafidianana izay ho fitafy na ny fomba hitafiany izany….Toy ny maha-samihafa ny olona no maha-samihafa ny safidy eto amin'ity tontolo feno fasahamihafàna ity. Ankoatra izay, tsy hisy mihitsy ny fahafahana mamorona raikipohy ho an'ny olona rehetra ka hanerena azy io hotafian-dry zareo na hampanekena azy ireo azy io an-tery!…Tsy vitan'ny kaominisma ny namorona vahoaka iray tokambolo ary tsy ho vitan'ny raikipohy ny mamatotra olombelona.”
12 ora izayAmerika Avaratra